Truth Post Nepal | एक महिनाको अनुभवबाट न्यूयोर्कका डाक्टरहरूले सिकेका कोरोना उपचार विधि - Truth Post Nepal एक महिनाको अनुभवबाट न्यूयोर्कका डाक्टरहरूले सिकेका कोरोना उपचार विधि - Truth Post Nepal
(द न्यूयोर्क टाइम्स) एक महिनाअघि मात्र कोरोना भाइरस कहिल्यै नटुंगिने बिरामीको लाम बनेर न्यूयोर्कका अस्पतालमा प्रवेश गरेको थियो। महामारीका रूपमा दन्किँदो यो ज्वालाले हेर्दाहेर्दै अमेरिकालाई नै आफ्नो केन्द्र बनायो।
यो प्रश्नमा न्यूयोर्कको लिंकन मेडिकल सेन्टरस्थित आइसियू फिजिसियन डा. नील केमालोभिक भन्छन्, ‘जे कुरा थाहा छ जस्तो लागेको थियो, त्यसबारे हामी अनभिज्ञ रहेछौं।’
हुन पनि यस किसिमका महामारी फैलाउने रोग ठीक पार्न जसलाई ‘अचुक उपाय’ मानिँदै आएको थियो, ती रातारात फेल भए।
‘न्यूयोर्क क्षेत्रका डाक्टरले कोभिड–१९ सँग लड्न कुनै भरपर्दो तरिका सार्वजनिक गरेका छैनन्,’ न्यूजर्सीस्थित सेन्ट जोसेफ्स युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका सहायक प्राध्यापक डा. आनन्द स्वामीनाथन भन्छन्।
‘महामारी फैलिएको धेरै समय नबितेको अवस्थामा चिकित्सकहरूले निकालेका उपाय कत्तिको प्रभावकारी छन् भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन।’
‘केही महिनामै हामीले धेरै कुराको जवाफ पाउनेछौं भन्नेमा म ढुक्क छु,’ न्यूयोर्कस्थित माइमोनेडिस् मेडिकल सेन्टरको आपतकालीन विभागमा कार्यरत फिजिसियन डा. रुबिन स्ट्रायर भन्छन्, ‘कतै न कतैबाट संकेत नपाउन्जेल अहिल्यै त्यसबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था छैन।’
‘बिरामीलाई कुरा गर्दागर्दै फोन छाड्न लगाएर श्वासप्रश्वास गराउने ट्युब लगाइदिनुपरेको अनुभव मैले जीवनमा यसअघि कहिल्यै गरेको थिइनँ,’ न्यूयोर्ककै बेलव्यू हस्पिटल सेन्टरमा १० दिन बिताएका डा. रिचर्ड लेभितान भन्छन्।
डा. लेभितानको यो अनुभव किन अनौठो भयो?
केही बिरामी भने अक्सिजन लिँदै र ओछ्यानमा ओल्टेकोल्टे फेर्दाफेर्दै सामान्य अवस्थामा पुगिरहेका छन्। यसरी गरिने उपचारलाई ‘प्रोनिङ’ भनिन्छ।
न्यूयोर्ककै क्वीन्सस्थित एल्महर्स्ट हस्पिटलको बेडछेउ टाँसिएको एउटा पर्चामा बिरामीले कति-कति बेला ओल्टेकोल्टे फेर्ने भन्ने जानकारी पनि उल्लेख छ। यसलाई न्यूयोर्ककै ब्रोंक्सको मोन्टिफियोर मेडिकल सेन्टर र म्यानहटनको माउन्ट सिनाई मेडिकल सेन्टरका डाक्टरले ट्वीटरमा व्याख्या गरेका छन्।
चौबीस घन्टा अवधिमा त झन्डै तीन-चौथाइको ‘इन्ट्युबेसन’ (मुखबाट जोडिने अक्सिजनको पाइप) निकालिसकिएको थियो। तीमध्ये १३ जनालाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्यो। कतिपय चिकित्सकले भने यो विधिले बूढापाका बिरामीमा काम नगरेको बताएका छन्।
‘यो दीगो उपाय हो कि होइन भन्ने कसैलाई थाहा छैन,’ डा. कपुतो भन्छन्, ‘म मार्चको पहिलो सातामा फेरि पुग्न पाएँ भने बिरामीलाई एकैपटक इन्ट्युबेसन नदेऊ भन्थेँ।’
यसरी अनुमान गरिएभन्दा बेग्लै परिस्थिति विकास हुनुको कारण के त?
थुप्रै डाक्टरले कोभिड–१९ का बिरामीलाई श्वासप्रश्वासका अन्य बिरामीका तुलनामा ‘इन्ट्युबेसन’ ले कमै फाइदा पुग्ने राय प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै, भेन्टिलेटरमा लामो समय राख्नाले अन्य जटिलता उत्पन्न हुने डर पनि उत्तिकै छ।
‘कोभिड-१९ का कारण फोक्सोको समस्या बोकेका बिरामीलाई इन्ट्युबेसनले कमै मात्र फाइदा गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई भेन्टिलेटर नचाहिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीमध्ये धेरै चिकित्सकले एकदमै आवश्यक नपरेसम्म इन्ट्युबेटर सकभर प्रयोग गरिरहेका छैनौं,’ डा. स्ट्रायर भन्छन्।
सिकिस्त बिरामीलाई पनि सुत्केरीलाई मसाज गर्ने बेला राखिने ‘म्याट्रेस’ मै सुताएर सिपिएपीजस्ता मेसिनबाटै सामान्य अक्सिजन दिइनुपर्छ भन्ने डा. लेभितानको मत छ।
उनले न्यूयोर्कस्थित आफू बसेको होटलमै यी साधन मगाएर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएका छन्। पहिलो बिरामीको रगतमा अक्सिजनको मात्रा ४० प्रतिशत थियो। उनी छोटोछोटो सास फेर्दै थिए। हृदयगति एकदमै तेज थियो। डा. लेभितानले उनलाई नाकमै फिट हुने प्लास्टिकका ट्युब लगाएर सामान्य अक्सिजन दिए। त्यसपछि ती बिरामी महिलालाई घोप्टो परेर मसाज टेबलमा सुत्न लगाए।
यति बेला डा. लेभितानका दाजुभाइले त्यस्ता थप ‘म्याट्रेस’ सहयोगस्वरुप प्रदान गरिरहेका छन्।
‘यसले के कस्तो परिणाम निकाल्छ भनेर हामीले हेर्नैपर्छ। तर, यो तर्कमा पर्याप्त दम छ,’ डा. स्वामीनाथन भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा मोटोपना पनि स्वाभाविक हिसाबले जोखिमपूर्ण अवस्था हो।’
युनिभर्सिटी अफ भर्मोन्टमा ‘पल्मनरी एन्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन’ बारे विज्ञता हासिल गरेका डा. जोस फार्कासका अनुसार ‘प्रोनिङ’ (ओल्टेकोल्टे उपचार) विधिका जोखिम कम छन्।
‘यो सुरक्षित र सजिलै गर्न सकिने साधारण तरिका हो,’ डा. फार्कास भन्छन्, ‘केही वर्षअघि मैले फाट्टफुट्ट बिरामीमा यसको प्रयोग गर्दा यति विस्तार होला र उपयोगी होला भनेर चिताएको थिइनँ।’
यो प्रतिघन्टा सय माइलको रफ्तारमा चल्ने कारको इन्जिन फेरि बनाउनुजस्तै हो। ‘केही साताभित्रै यो अभ्यास अझ प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने सिपालु फेला परे म आश्चर्यचकित हुने छैन,’ डा. स्वामीनाथन भन्छन्।
‘हरेकले पर्यवेक्षण गरेका छन् र हरेकसँग विचार छ,’ डा. स्ट्रायर भन्छन्, ‘विज्ञानले मात्र बाटो खोल्न सक्छ, जुन हामीसँग अहिलेसम्म उपलब्ध छैन।’
दिनभरको अनिश्चितता र थकानले भरिएको कामको बोझ सकिएपछि हरेक साँझ डाक्टरहरू आ-आफ्नो विवरण पहिल्याउँदै केही समाधान फेला परिहाल्छ कि भनेर घोत्लिन्छन्।
‘म एक्लै बस्ने गर्छु,’ डा. स्ट्रायर भन्छन्, ‘त्यसले म र मेरो आफ्नै कुशलता निम्ति पनि धेरै फाइदा दिने गर्छ।’
दिनभरको काम सकिएपछि बेलुकी श्रीमती र केटाकेटीलाई भेट्न घर जानुअघि आफूलाई संक्रामक भाइरसबाट मुक्त गराउने प्रक्रिया डा. स्वामीनाथनले पालना गर्छन्।
‘कतै अन्तै जाने विकल्प पनि हामीले अस्वीकार गर्यौं,’ उनी भन्छन्।
परिवारको साथले उनलाई शान्त बनाएको छ। उनी स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका साथीभाइसँग सामीप्यका लागि ‘जुम सेसन’ मा आबद्ध छन्। त्यहाँ धेरै रमाइला गतिविधि हुन्छन्।
‘कसैले इङ्लिस नेसनल ब्याले म्यूजिसियनहरूले जुम सेसनमा ‘स्वान लेक’ प्रस्तुत गर्न लागेको जानकारी ट्वीट गरेका थिए,’ उनले भने, ‘मैले त्यो संगीतको आनन्द लिएँ। त्यसपछि मलाई सम्पूर्ण शरीर हलुका महशुस भयो।’